ALAVOLY HO AN’NY MPIANATRA - Sekoly 114 no notolorana kilalaotsaina - Ministère de l'Education Nationale
ALAVOLY HO AN’NY MPIANATRA – Sekoly 114 no notolorana kilalaotsaina
Lanonana roa sosona no notanterahana tetsy amin’ny Lisea JJ Rabearivelo ny alarobia 13 Janoary 2016 teo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena.
Ny voalohany dia ny fanolorana tamin’ny fomba ofisialy ny kilalaotsaina avy amin’ny olona tsara sitrapo ho an’ny ministeran’ny fanabezam-pirenena.Ny faharoa dia ny fanolorana ny taratasim-bola avy amin’ny fanjakana ho an’ireo sekoly miahy tena hanamaivanana ny vesatra ara-bola ho an’ny ray amandreny.
« Sokerambolana » io no lohanteny nomen-dRamatoa Rakotozafy Mathlide Déverchin ireo kilalaotsaina izay noforoniny ka natolotra maimaim-poana ho an’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena. Nambaran-dRamatoa Rakotozafy Simone izay rahavaviny nisolo tena azy tamin’ny fandraisam-pitenenana fa mifandray akaiky amin’ny kilalao « scrable » izy io saingy manana endrika vaovao.Afaka atao amin’ny teny malagasy fotsiny na teny frantsay fotsiny na izy roa mitambatra ity kilalaotsaina ity. Mahatratra 5400 no isan’ity sokerambolana ity. Efa nisy hoy izy ny dikisionera teny malagasy nomen-dRamatoa Rakotozafy Mathilde ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena tamin’ny taona 2004 izay nahatratra roa alina.
Mahazo daholo hoy ny Tale Jeneralin’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena Dr Andriamampandry Todisoa ireo sekoly miisa 114 izay ahitana Epp, Ceg, Lisea ato anatin’ny fari-piadidiana Analamanga. Zavadehibe izao hoy izy mba ahafan’ny ankizy mivelatra eo anivon’ny fiaraha monina. Nampatsiahy ihany koa Andriamatoa Tale Jeneralin’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana mamaky teny sy manoratra fa efa nisy ny fanomezana TV nomerika, panneaux solaires, sns ho an’ny fari-piadidim-pampianarana eto Analamanga.
Rehefa vita ny fanolorana ity kilalaotsaina ity dia niroso tamin’ny fanohizana ny lanonana tamin’ny fanolorana ny taratasim-bola fanamaivanana ny vesatra ara-bolan’ny ray mandreny ho an’ny sekoly miahy tena. Araka ny nambaran’ny talen’ny ONEP dia mahatratra 2063 ny ecole primaire manana ekolazy latsaky ny 800 ariary, manana mpampianatra ara-dalàna, manana fahazoan-dalàna hampianatra manerana ny nosy ka mahatratra 1 350 470 000 ar ny fanampiana omen’ny fanjakana azy ireo. Ho an’ny faritra Analamanga manokana dia mahatratra 274 320 000 ar.